Deg Deg: Al-Shabaab oo markale Weeraray Siinka-dheer | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Deg Deg: Al-Shabaab oo markale Weeraray Siinka-dheer
Deg Deg: Al-Shabaab oo markale Weeraray Siinka-dheer
Weerarkan ayaa markale waxa uu Maanta uu ka dhacay koontoroolka Siinka-dheer ee duleedka Muqdisho halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida Soomaaliya.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in mar qura laga war helay weerar lagu soo qaaday Koontoroolka Siinka-dheer,isal markaana halkaasi uu ka bilaawday dagaal mudo daqiiqado ah socday.
Waxa uu sheegay in Hubka noocyadiisa kala duwan sida kuwa Garbaha laga tuuro lagu soo weeraray koontoroolka,isla markaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah,balse isagu uu indhihiisu ku arkay dhaawaca dad rayid ah oo gaaraya ilaa 3 ruux.
Al shaaab ayaa marka hore dhul geedo ku yaalaan oo u dhaw koontoroolka ciidanka waxa ay ku dhufteen hal zaban ah ciidamada iyana rasaas ayey ku fureen,khasaaro kala duwan ayaana shabaab lagu gaariisay.
Xalay fiidkii ayay aheyd markii rag hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen Koontoroolka siinka-dheer waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in weerarkaas ay iska caabiyeen.
Previous articleMaxaad kala socotaa kulanka Abiyi Axmed iyo C/fatah Al-Sisi
Next articleWadooyinka Muqdisho oo markale la xiray